Dowlada Somalia oo lagu eedeeyey in ay balamo uga baxday sheekh Mukhtar Roobow… – Hagaag.com
Dowlada Somalia oo lagu eedeeyey in ay balamo uga baxday sheekh Mukhtar Roobow…
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka baxday balamo ay horay ula gashay Mukhtaar Roobow, oo ku saabsanaa wada hadaladii labada dhinac u dhaxeeyay.
C/rashiid C/llaahi oo ka mid ahaa Wasiiradii u horeeyay ee iska casilay Xukuumadda Kheyre sanadkii hore ayaa sheegay in wada hadalka dowladda iyo Mukhtaar Roobow uu muddo soo socday, isla markaana uu ahaa ninkii wada hadalka bilaabay oo horseedka u ahaa.
“Waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo wada hadalka Mukhtaar Roobow iyo dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ma aheyn mid iyaga u bilowday, wada hadalkaas dowlado ka horeeyay wey jireen, dhabta marka laga hadlayo wada hadalka qofka horseedka u ahaa ee Madaxweynaha ku wargeliyay in dowladda kala shaqeeyo aniga ayaa ahaa”ayuu yiri Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dowladda aanay fulin inta badan waxyaabihii laga wada hadlay iyo balamihii la wada galay, oo ay ka mid aheyd in la fududeeyo Mukhtaar Roobow iyo arrimihiisa, balse aanay suurta gelin, isagoo ku dhaliilay dowladda Federaalka in ay ka gaabisay.
Waxaa uu sheegay in markii uu Mukhtaar Roobow u soo wareegay dhanka dowladda laga wada hadlay waxyaabo badan oo qodobeysan in si wadajir ah loo wada howl galo, shaqo fiican la qabto, balse nasiib darro aanay dhicin.
Mr C/rashiid ayaa sheegay in Mukhtaar Roobow uu Al-Shabaab ka soo tagay muddo lix sano ka hor, isla markaana mowqifkiisa Musharaxnimada uu ahaa mid caddaa, balse waxaa uu wax lala yaabo ku tilmaamay go’aanka dowladda ka soo baxay markii Mukhtaar Roobow uu tagay Baydhabo.
“Mukhtaar Roobow illaa Guddoomiye Baarlamaan ayay wada fariisteen, isaga iyo Musharaxiin kale, intaas haddii wax jiraan maxaa horay loo soo saari waayay ee markii uu Baydhabo tagay loo soo saaray go’aanada is hor-taaga ee ku jiray qodobo aad u daciif ah oo ahaa mid dano siyaasadeed laga leeyahay”ayuu yiri C/rashiid C/llaahi.
Waxa auu sheegay in dowladda mar hore laga rabay in waxyaabaha ay sheegeyso in Caalamka kala dhaxeeyaan inay fududeyso, balse aanay aheyn in hadda ay ku soo baraarugto markii Sheekh Mukhtaar Roobow uu tagay Baydhabo, taageerana ka helay shacabka, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid lagu carqaladeynayo.
Dowladda Soomaaliya ayaa is hor-taagtay Musharaxnimada Mukhtaar Roobow ee Koonfur Galbeed, isla markaana shaacisay inay jiraan xayiraado weli saaran Sheekha, iyadoo maalmo ka hor arrinta Musharaxnimada Mukhtaar Roobow uu Baydhabo u tagay Wafdi Saraakiil uu hoggaaminayay Taliyaha Nabadsugida Xuseen Cusmaan Xuseen.